Indlu e-Centennial Acacia enechibi kanye nehlathi - I-Airbnb
Indlu e-Centennial Acacia enechibi kanye nehlathi
Malaybalay, Northern Mindanao, i-Philippines
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Allen
Indlu yesihlahla isezitezi ezimbili phezulu esihlahleni esineminyaka eyikhulu ubudala. Inamagumbi amabili avulekile, igumbi lokuphumula kanye nekhishi ngaphansi kwendawo yokuhlala. Ihambisana ne-gazebo enomgodi we-bbq, izindlu zangasese ezimbili ezineshawa kanye nedamu lokugezela. Le ndawo isepulazini eliseduze komgwaqo omkhulu futhi igcwele izihlahla zoqalo, i-eucalyptus nezihlahla ze-falcata. Ukusuka endlini yesihlahla uzobona amasimu kaphayinaphu kanye nohlaza
Indlu yezihlahla yakhiwe ngamapulangwe kanye noqalo oluvunwa epulazini. Kunamafasitela ambalwa kuphela, futhi wonke amanye angama-ventanilla ashelelayo. Inophahla olucacile lwe-polycarbonate ukuze izivakashi zikwazi ukubuka izinyoni namaqabunga ewa emagatsheni. Kubathandi bemvelo, isivakashi singathatha uhambo lwemizuzu engamashumi amabili ukuya ehlathini bese sibona umfula ogcwele itshe. Indlu ingalingana kahle omatilasi abathathu esibahlinzekayo. Emaqenjini amakhulu, ezinye izihambeli zingagxumeka amatende azo phansi kwesihlahla.
Ngihlala eDolobheni laseMalaybalay kodwa ngike ngachitha ubusuku endlini esesihlahleni. Kuwumlingo ukuthwalwa isihlahla esikhulu esidala, esizungezwe yilo lonke uhlaza. Kodwa njengoba iseduze nomgwaqo omkhulu, umsindo wamaloli ungase ucasule ngezinye izikhathi kodwa ungabi mkhulu ngokwanele ukuze uvale ama-cicada nezinyoni eziculayo.
Ngiyakujabulela ukwamukela izivakashi. Ngiphinde ngilale endlini yokuphumula eseduze yezivakashi. Ngingatholakala nge-globe noma izinombolo zami zeselula, i-imeyili noma nge-facebook messenger.